Imiphumela ye-coronavirus Covid19: ezempilo kanye nokwehliswa kokungcola | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ubhadane lwe-coronavirus seluvele luyinto yangempela emhlabeni jikelele. Okuqale njengecala elingalodwa eChina kuvele kwaba wubhadane lomhlaba wonke. Kunemiphumela eminingi yeCovid19 coronavirus yezempilo yomuntu kanye nemvelo. Kumele kuthiwe i-coronavirus yokugcina iyasiza.
Kulesi sihloko sizokhuluma ngokuthi yini i- imiphumela ye-coronavirus Covid19.
1 Kuthelelekile emhlabeni wonke
1.1 Yini i-coronavirus
2 Imiphumela ye-coronavirus Covid19
3 Imiphumela yeCovid19 coronavirus ekungcolisweni
Kuthelelekile emhlabeni wonke
Phakathi kwamazwe athinteke kakhulu yileli gciwane elisabalele sithola iChina, i-Italy, iJalimane neSpain. Indawo lapho leli gciwane lisakazeka lisuka komunye umphathi liye komunye liyenza libe yingozi kakhulu. Njengazo zonke izifo, kunabantu abathile abasengozini abanenkinga enkulu ngokusabalala kwalesi sifo. Kulokhu, labo abaneminyaka engaphezu kwengu-50 ubudala futhi abanezifo zangaphambilini ezinjengesifo sikashukela, umdlavuza noma izinkinga zokuphefumula baba nokubi kakhulu kunentsha enempilo.
Ubhekene nokwanda okubonakalayo kokutheleleka nokushesha kwako, uhulumeni waseSpain unqume isimo se-alarm izinsuku eziyi-15. Lokhu kuye kwahlukanisa bonke abantu abaphoqeleke ukuthi bahlale emakhaya isikhathi eside ngangokunokwenzeka. Uvunyelwe kuphela ukuphuma uyothenga okulungile futhi okudingekayo ukuze ukwazi ukuzondla wena kanye nezidingo ezithile eziyisisekelo njengokuhamba nenja noma ukuya emsebenzini.
Iningi labantu lithumela ucingo olubavumela ukuba baqhubeke nosuku lwabo lomsebenzi besekhaya. Ukuvalelwa kwezindlu kungenye yamasu okukwazi ukulawula ukubhebhetheka kwaleli gciwane futhi kube nokulawula okungcono kwezempilo ukugwema ukugcwala.
Leli gciwane likhiqiza isifo esithathelwanayo esidalwa yi-coronavirus eyavela eWuhan ngoDisemba wangonyaka odlule. Ama-coronavirus Ungumndeni obanzi wamagciwane okwazi ukudala izifo ezahlukahlukene kubantu nasezilwaneni. Lezi zinhlobo zezifo eziwumashayabhuqe zivame ukubangelwa amagciwane asuka ezilwaneni asebenzisa i-ribonucleic acid njengezinto zofuzo ukuze zikwazi ukukhuphuka futhi zigcine sezidluliselwa kwezinye izidalwa eziphilayo. Umsolwa omkhulu wokuba yimvelaphi yeCovid19 coronavirus yilulwane.
Kukhona ucwaningo oluthile oluthi bekungahlala izinyoka kuqala. Yize abantu abaningi befanise leli gciwane nomkhuhlane, umkhuhlane ovamile ubangela ukufa okumbalwa kakhulu ngokulingana nalabo abanalo. Endabeni ye-coronavirus, kunamathuba okufa kwamacala angu-3.4% nomkhuhlane ovamile ongaphansi kwe-1%. Akwaziwa ukuthi kunokuziphatha kwesizini yini, ngakho-ke asazi noma kuzoqala ukwehla yini ngokufika kwentwasahlobo enyakatho Nenkabazwe.
Enye yezimfihlakalo ezungeze leli gciwane yikhono lalo lokuguquka. Lokhu kuzoba ukuguquguquka kokunquma ukwazi ukuthi uhlobo lomuthi wokugoma luzokwanela ukuwuqeda noma uma luzobuya isizini ngayinye ngendlela ehlukile. Igciwane elishiye iWuhan alifani ncamashi nalelo elifikile eSpain. Ama-genome okuqala aphelele akwa-SARS-CiV-2 atholwe emacaleni okuqala aqinisekisiwe kuleli futhi kwembulwe ukuthi ihlala iguquka njalo.
Yize kungenele ngokwanele ukuthi kungafinyelelwa eziphethweni mayelana nokudluliswa kwaso, kunezici eziningi zomtholampilo zalesi sifo kanye nezinga lokusakazeka kwalo okusisiza ukuthi sithole izinyathelo ezithile. Ezinye zezimpawu eziyinhloko ezihlala zigula kakhulu ezigulini yilezi:
Ubuhlungu bemisipha kwezinye iziguli
Ukuminyana kwenkhala kwezinye
I-Rhinorrhea ayikho kuzo zonke iziguli.
Umphimbo obuhlungu kwezinye iziguli
Uhudo kwezinye iziguli.
Zonke lezi zimpawu zivame ukuba mnene impela futhi zivele kancane kancane. Abanye babantu abanegciwane abakhombisi neyodwa yale miphumela nezimpawu futhi abaguli nokugula. Umuntu oyedwa kwabayisithupha olwa negciwane oba nokugula okungathi sína kanzima ekuphefumuleni. Laba bantu ikakhulukazi asebekhulile futhi ababonakala benezimo zangaphambilini zokwelashwa ezifana nomfutho wegazi ophakeme, izinkinga zenhliziyo noma isifo sikashukela. Kwezinye izimo ezibucayi kakhulu kungadala inyumoniya, isifo sokuphefumula esibi kakhulu kanye nokwehluleka kwezinso.
I-Centers for Disease Control and Prevention ilinganisela ukuthi izimpawu zingavela ezinsukwini ezimbili nje noma ezinsukwini eziyi-14 ngemuva kokuvezwa. Kodwa-ke, kukhona ezinye izazi ze-epidemiologists eziphakamisa ukuthi isikhathi sokufukamela sale coronavirus entsha singafika ezinsukwini ezingama-24.
Imiphumela yeCovid19 coronavirus ekungcolisweni
Uma sithole okuthile okuhle ngalolu bhubhane, kunciphisa ukungcola komhlaba. Ukuvalelwa nokuncishiswa kokuhamba kwezimoto okwande kakhulu kube nomthelela ekuthuthukiseni ikhwalithi yomoya emazweni amaningi. Kubangele ukwehla komsebenzi wezokuthutha wezimboni kusetshenziswa izimoto ezisebenzisa amandla omlilo.
Kuphela amasonto ambalwa edlule kushicilelwe ezinye izifundo nezithombe zesathelayithi ezikhombisa ukuthi ubunzima balolu bhubhane kunciphise konke ukukhishwa kwe-CO25 e-China ngama-2% futhi kukhombisa ukwehla okukhulu e-Italy ngokugxila kokungcola okufana ne-nitrogen dioxide ethinta kabi ikhwalithi yomoya futhi eyigesi ebamba ukushisa.
Ukungcoliswa komoya kwehle kakhulu ngemuva kokuthi i-coronavirus iphoqe zonke izakhamizi ukuthi zizivalele emakhaya. Ukungcola kudalwa ikakhulu yimisebenzi yabantu kwazise amagesi akhishwa ngamapayipi e-exhaust nokukhiqizwa kukagesi. Izitshalo zamandla aphehlwa ngamalahle ikakhulukazi ezandisa ukukhishwa kwe-carbon dioxide. Ngenxa yemikhawulo yezokuvakasha, izinkampani eziningi nezimboni zivaliwe zasebenzisa amandla amancane.
EMadrid naseBarcelona, ​​ikhwalithi yomoya nayo isiqale ukuba ngcono ngemuva kwesimemezelo se-alamu izithupha zikasawoti. Kungahle kube nokuhlukahluka okuncane kwimininingwane yezendlalelo zamafu okuphila nokuguquka kwesimo sezulu, yize kuqinisekile ukuthi ukwehliswa kokukhishwa kuhambelana nokuvinjelwa e-Italy lapho kubonakala khona ukuthuthuka kwekhwalithi yomoya.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi ngemiphumela ye-Covid19 coronavirus.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ciencia » Imiphumela ye-coronavirus Covid19